ला लिगा २०१९/२० : कस्तो छ अवस्था? | Hamro Khelkud
एजेन्सी – स्पेनिस ला लिगा पनि कोरोना संक्रमणको स्थगनपछि फर्कने लगभग पक्का भएको छ । जुन ८ देखि लिग सुरु गर्न सरकारले स्वीकृति दिएपछि लिगले जर्मन बुन्डेसलिगाको पथ पछ्याउने भएको छ ।
मार्च १२ मा रियल म्याड्रिडको बास्केटबल टोलीमा संक्रमण देखिएपछि लिग स्थगित भएको थियो । अब जुन ८ मा लिग सुचारु हुँदा ४३ दिनको अन्तरमा सबै क्लबका ११ खेल बाँकी रहेको अवस्था छ । यसपटक लिग उपाधि, युरोपेली छनोट र रेलिगेसन क्षेत्र सबै स्थानमा प्रतिस्पर्धा रोमान्चक छ । ला लिगा अहिले कस्तो स्थितिमा छ त, एएसले गरेको विश्लेषण यसप्रकार छ :
कुन टोली कहाँ ?
रियल म्याड्रिडले पछिल्लो सात सिजनमा मात्र एकपटक लिग उपाधि जितेको छ । यसपटक रियल बार्सिलोनालाई लगातार दबाबमा राख्दै लिग उपाधि हत्याउने सुरमा छ । हाल लिग तालिकामा बार्सिलोना २ अंकको अग्रतासहित शीर्षस्थानमा छ । रियल म्याड्रिडले रियल बेटिससँग पराजय भोगेपछि बार्सिलोना माथि उक्लिएको थियो ।
रियलले सान्टियागो बर्नाबाउमा बार्सिलोनालाई पराजित गर्दै लय समातेको छनक दिएपनि त्यसलाई लामो समय निरन्तरता दिन सकेन । सेभिल्लासँग हार बेहोर्नुले अघिल्लो जितलाई छायाँमा पारिदियो । यद्यपि लिग उपाधिको भिडन्तमा रियल र बार्सिलोना मै प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
बार्सा र रियल दुवै टोली च्याम्पियन्स लिगमा पनि प्रतिसपर्धा गरिरेका छन् । राउन्ड अफ १६ को पहिलो लेगमा रियल म्यान्चेस्टर सिटिसँग २-१ ले पराजित भएको थियो । यता बार्सिलोनाले पनि इटालियन क्लब नेपोलीसँग १-१ को बराबरी खेलेको थियो ।
अर्को सिजनको च्याम्पियन्स लिग छनोटका लागि पनि प्रतिस्पर्धा निकै कडा रहेको छ । तेस्रो स्थानको सेभिल्ला र छैटौं स्थानको एटलेटिको म्याड्रिडबीच मात्र २ अंकको अन्तर छ । लिगका शीर्ष ४ टोलीले च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।
आक्रमणमा केहि कमजोर देखिएको एटलेटिकोले यस सिजन धेरै खेल बराबरीमा टुंग्याएको छ । तर च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा स्थान पक्का गर्ने क्रममा एटलेटिकोले लिभरपुललाई स्तब्ध पारेको थियो । अर्को सिजन पनि च्याम्पियन्स लिगमा स्थान पक्का गर्न एटलेटिकोले रियल सोसीडाड र गेटाफेको चुनौती पन्छाउनु पर्ने हुन्छ ।
लिगको पुछारतिर भने चार टोलीबीच रेलिगेसन टार्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । हाल एस्पान्योल (२०), लेगानेस(२३) र रियल मालोर्का (२५) रेलिगेसन क्षेत्रमा छन् । यद्यपि १८ औं स्थानको मालोर्का र १७ औं स्थानको सेल्टा भिगोबीच मात्र १ अंकको फरक छ । त्यस्तै एइबार पनि सेलता भन्दा १ अंक बढी जोड्दै १६ औं स्थानमा छ ।
लिग तालिका :